Best Bitcoin Brokas na February 2021 - [Beginners Guide to PROFIT]
Best Bitcoin Broka - Mụta 2 Trade Full 2021 Guide!
Ndị na-ere ahịa Bitcoin, na-achọ isonye na mgbanwe mgbanwe cryptocurrency site na ịzụta ụfọdụ Bitcoin nke gị? Ọ bụrụ otu a, ụzọ kachasị mfe ma dị oke mma iji mee nke a bụ site na onye na-azụ Bitcoin.
Na nkenke, ndị kacha mma Bitcoin na-enye gị ohere ịmepe akaụntụ ngwa ngwa, tinye ego na debit ma ọ bụ kaadị kredit - wee zụta obere Bitcoin ma ọ bụ obere dịka ịchọrọ.
Na nke ahụ kwuru, enwere ọtụtụ narị nyiwe na-arụ ọrụ n'ahịa, yabụ ịmara onye na-ere ahịa ịdebanye aha ya abụghị ihe dị mfe. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịgụ akwụkwọ ndu anyị na Best Bitcoin Broka.
Ọ bụghị naanị na anyị na-akọwapụta ihe kacha mma 5 Bitcoin na-ahọrọ nke 2021, mana anyị na-akọwakwa ihe kpatara ịhọrọ Bitcoin CFDs bụ ụzọ nchekwa, dị ọnụ ala, na nke kachasị adaba maka itinye ego.
Mara: Ihe kachasị mkpa metrik ị ga-achọ mgbe ị na-achọ Bitcoin broker bụ ụkpụrụ. Mee elu mee ala, ọ bụrụ na onye na-ere ahia enweghị akwụkwọ ikike, ị kwesịrị izere ya.
Gịnị bụ Bitcoin Brokas?
Onye na-ere ahia Bitcoin bụ naanị ahia n'ịntanetị ikpo okwu na-enye gị ohere ịzụta na ire cryptocurrencies. Dị ka ahịa azụmaahịa dị n'ịntanetị, usoro a chọrọ ka ị mepee akaụntụ, tinye ego, wee kpebie ego Bitcoin ịchọrọ ịzụta. Ndị na-ere ahịa na-enyekarị gị ohere iji usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị dịka debit / kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ akụ, ma ọ bụ wayo, nke na - eme ka usoro ịzụ ahịa dị oke mfe.
Na nloghachi, ndị na-ere ahịa Bitcoin ga-akwụ gị ụgwọ. Nke a nwere ike ịbịakọta n'ụdị nke nha na nha, yabụ ụgwọ gị ga-adabere na onye na-ere ahịa ị na-eji. Dịka ọmụmaatụ, ebe ndị na-ewu ewu Bitcoin na-ewu ewu dị ka Coinbase na-akwụ ụgwọ iji tinye ego na mee nzụta - nyiwe dị ka Crypto Rocket na eToro adịghị. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ịghọta ego nhazi nke onye na-ere ahịa tupu ị banye.
Site na nke a - enwere ụdị Bitcoin broka na-arụ ọrụ na ntanetị - yabụ nke ị họọrọ ga-adabere na ebumnuche itinye ego gị ogologo oge. N'ụzọ dị oke mkpa, nke a ga - abụrịrị onye na - ere ahịa chọrọ ka ịchekwa Bitcoin gị na obere akpa nzuzo, ma ọ bụ onye na - ere ahịa nke na - enyere gị aka itinye ego gị site na CFD achịkwa.
Ofdị Bitcoin Broka
Ọ dị oke mkpa ka ị ghọta ka nhọrọ nke onye na-azụ ahịa gị nwere ike isi nwee isi na ntinye nke ịzụta Bitcoin gị, yabụ anyị kọwara nke a n'ụzọ zuru ezu na ngalaba ndị dị n'okpuru.
Yingzụta 'Ezigbo' Bitcoin
Bitcoin bụ ego ego - nke pụtara na ọ nweghị onye ọ bụla ma ọ bụ ikike ya anaghị achịkwa ya. Dị ka ndị dị otú a, ndị na-ejide Bitcoin na obere akpa nzuzo bụ 100% na-ahụ maka idebe ya. N'aka ozo, oburu na emebiri akpa akpa Bitcoin gi - ma obu i nyefere ego na adreesị na-abaghị uru, Bitcoin gi ga-efu ruo mgbe ebighi ebi.
N'adịghị ka ego ọdịnala, ị gaghị enwe ike ịwelite ekwentị ma rịọ onye na-ere ahịa ka o nyochaa ọnwụ. N'aka nke ọzọ, nke a bụ ihe ize ndụ nke ịzụta 'ezigbo' Bitcoin, ebe ị kwesịrị ijide n'aka na ị ga-echedo ya oge niile.
Ugbu a, nke a abughi onye na-ewepụta ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ịmara otú obere akpa ego si arụ ọrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ nnabata ọhụụ zuru oke ịbanye na oghere Bitcoin maka oge izizi gị, echiche nke ịchekwa mkpụrụ ego nke gị abụghị ihe na - enweghị isi - ọkachasị ma ọ bụrụ na etinye nnukwu ego.
Ka o sina dị, ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe Bitcoin 'n'ezie', onye na-ere ahịa na ajụjụ ga-akwado usoro gị site na usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị. Ozugbo azụrụ mkpụrụ ego ndị ahụ, ị ​​ga-ewezuga ha na obere akpa ha. Platformsfọdụ nyiwe na-enye gị ohere ịchekwa mkpụrụ ego ahụ n'ime 'obere akpa web' nke onye na - ere ahịa - agbanyeghị, nke a dị oke egwu.
Bitcoinzụta Bitcoin CFDs
Ya mere, nke ahụ hapụrụ anyị nhọrọ 2 - ịzụta Bitcoin CFDs. Maka ndị na-amaghị, CFD (Nkwekọrịta-maka-Iche) bụ ngwa ọrụ ego nke na-enye gị ohere itinye ego na akụ na ụba na-enweghị ịnwe ya. Kama, naanị ihe ị na - eche bụ ma ọnụ ego ọ ga-akwụ ma ọ bụ daa.
Ọbụghị naanị na nke a gụnyere akụ dịka Bitcoin, mana n'ụzọ nkịtị ngwa ọrụ ego ọ bụla a na-ere na ahịa ọdịnala. Chee echiche banyere ahịrị ọla edo, mmanụ, ebuka, indices, gas, wheat, na ETF. N'otu aka, ịzụta Bitcoin CFD ga-apụta na ọ bụghị gị nwe akụ ahụ na-akpata ya.
Otú ọ dị, nke ahụ ọ̀ dị ihe o mere? N'ụzọ bụ isi, ọ bụrụ na ị na-ele anya zụta Bitcoin n'ihi na ị chere na uru ọ bara ga-abawanye n'ọdịnihu, mgbe ahụ CFDs nwere ike ịkwado nke a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịzụta Bitcoin CFD mgbe ọ bara uru na $ 6,000 - wee ree ya afọ abụọ mgbe e mesịrị na ọnụahịa nke $ 10,000 - ị ka na-enweta otu uru ahụ ị gaara eme site na ịnweta 'Bitcoin' n'ezie.
N'ezie, uru nke iji ndị na-ere Bitcoin na-arụ ọrụ na CFD bụ okpukpu anọ - ka anyị na-akọwa n'okpuru.
1. gwọ dị obere
Otu n'ime ndị na-ewu ewu Bitcoin na-ewu ewu na oghere ịntanetị bụ nke Coinbase. Isi ihe kpatara nke a bụ na ikpo okwu na-eme ka ọ dị mfe ịzụta Bitcoin iji debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ kwa ụbọchị. Agbanyeghị, Coinbase na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ya.
Iji maa atụ, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ 3.99% iji debe na kaadị debit / kaadị, wee nwekwuo 1.5% oge ọ bụla ịzụrụ ma ọ bụ ree Bitcoin. Feesgwọ ndị a bụ nnukwu jiri ya tụnyere ndị na-ere Bitcoin na-ahụ maka CFDs.
N'ezie, ọtụtụ n'ime ndị na-ere Bitcoin na anyị na-akwado na ibe a ọ bụghị naanị na-enye gị ohere itinye ego n'efu - mana ị nwere ike ịzụ ahịa Bitcoin na-enweghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla.
2. Ndị na-ere ahịa CFD na-achịkwa nke ọma
Ọtụtụ n'ime sara mbara cryptocurrency ore ohere na-arụ ọrụ n’usoro a na-achịkwaghị achịkwa. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na mba ole na ole enwebeghị iwu iwu akọwapụtara - nke pụtara na nyiwe nwere ike ịzụ ahịa na-enweghị ikikere.
Kama nke ahụ, a na-achịkwa oghere ndị na-ere ahịa CFD kpamkpam - nke pụtara na ego gị ga-adị mma n'oge niile. Dịka ọmụmaatụ, ndị ahịa Bitcoin kachasị elu edepụtara na ibe a nwere ikikere usoro iwu. Nke a gụnyere ahụ dịka UK's FCA, Australia ASIC, ma ọ bụ Cyprus's CySEC.
3. Nchekwa na ire ere enweghị nsogbu
Dika anyi kwuburu na mbu, izuta 'Bitocin' bu ihe nro. Dịka ọmụmaatụ, achọrọ ka ị wepụ mkpụrụ ego ahụ na onye na-ere ahịa ị họọrọ, wee debe ha na obere akpa gị. N'ihe banyere iwepu ego Bitcoin gị, ị ga-ebufe mkpụrụ ego ahụ n'ime onye na-ere ahịa n'ịntanetị, ma gbanwee ha maka ego. Nke a bụ usoro dị oke egwu nke jupụtara n'ihe egwu.
Na nke ahụ kwuru, site na iji onye na-azụ Bitcoin nke pụrụ iche na CFDs, ịkwesighi ichegbu onwe gị maka nchekwa ma ọlị. Nke a bụ n'ihi na CFDs na - agbaso akụ na ụba - nke pụtara na ego anaghị adị. Dị ka ndị dị otú a, ọ dịghị atụ egwu Bitcoin gị furu efu ma ọ bụ zuru ohi!
Ọzọkwa, nke a na-emekwa ka ọ bụrụ ikuku mgbe a bịara n'ịchụ ego gị. Dika echekwara Bitcoin na onye na-ere ahia site na ngwa CFD, ị ga-etinye ahịa maka ire ahịa gị. Ozugbo ị mere, ị nwere ike wepụghachi ego ahụ na kaadị akwụmụgwọ gị / kaadị akwụmụgwọ gị, akaụntụ ụlọ akụ, ma ọ bụ obere akpa gị.
4. Ike itinye leverage na ire ere dị mkpụmkpụ
N'adịghị ka onye na-ere ahịa Bitcoin nke oge, ndị na-enye cryptocurrencies n'ụdị CFDs na-enye gị ohere itinye ntinye ego. Maka ndị na-amaghị, nke a pụtara na ị ga-enwe nhọrọ nke ịzụ ahịa karịa karịa na akaụntụ gị.
Na UK, dịka ọmụmaatụ, ndị na-etinye ego nwere ike itinye ihe mgbatị ruo 2x mgbe ha na-azụ Bitcoin, nke pụtara na itinye ego £ 500 ga-enye gị ohere ịzụta £ 1,000 bara uru. Na mpaghara ndị ọzọ, ị nwere ike ịzụ ahịa nke ọma ruo 100x - nke pụtara na nhazi £ 500 ga-enye gị ohere ịzụ ahịa na with 50,000!
N'otu aka ahụ, ndị na-ere ahịa CFD na-akwado cryptocurrencies na-enyekwa gị ohere ịre Bitcoin obere oge. Nke a pụtara na ị nwere ike ịme uru na ihe omume Bitcoin na-agbada na uru.
Nkwụ ụgwọ na Bitcoin Broka
Yabụ ugbu a ịmarala ụdị abụọ Bitcoin broka na-arụ ọrụ ugbu a n'ahịa, anyị ga-atụle ugbu a ịkwụ ụgwọ. Emechakwa, ị ga - eji ego ụwa - zụta Bitcoin - yabụ ịkwesịrị iche echiche banyere otu ị chọrọ isi nweta ego na site na onye na - ere ahịa.
Imirikiti ndị na-ere ahịa Bitcoin na-enye gị ohere itinye ma wepụ ego na usoro ịkwụ ụgwọ. Nke a nwere ike ịgụnye:
Ọ kachasị mma ịlele ma usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ ka akwadoro tupu ịmepe akaụntụ na onye na-ere ahịa.
Ego nkwụnye ego / wepụ
N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị na-ere ahịa Bitcoin ga-akwụ gị ụgwọ iji debe na / ma ọ bụ wepụ ego. Dịka anyị tụlere na mbụ, ụdị nke Coinbase na-akwụ onye nwere 3.99% ụgwọ na nkwụnye ego / kaadị akwụmụgwọ.
Nke a pụtara na nkwụnye ego £ 1,000 ga-efu gị £ 39.99 na ụgwọ. Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ụdị nke eToro anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla na nkwụnye ego, yana naanị $ 5 na ndọrọ ego.
Ego Bitcoin Broker
Ndị na-ere ahịa Bitcoin nọ na azụmaahịa ị nweta ego, yabụ ịkwesịrị ịghọta nghọta nke usoro ego nke usoro ikpo okwu. Nke a nwere ike ịgụnye:
Isslọ ọrụ ahia
Nke a bụ ọrụ nke onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ oge ọ bụla ị na-azụ ahịa. Nke a gụnyere ego mgbe ị zụrụ Bitcoin, yana mgbe ị na-ere ya. Ọ bụrụ na ebubo ebubo azụmahịa, mgbe ahụ ị ga-akwụ pasent nke ego ịchọrọ ịzụta.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ego nke 1.5%, ma ịchọrọ ịzụta worth 2,000 uru nke Bitcoin. Nke a ga-atụgharị na ego izizi nke £ 30. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-ere Bitcoin gị, ị ga-akwụkwa ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ego Bitcoin 2,000 Bitcoin gị bara uru ugbu a £ 3,000. Nke a pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ 1.5% na uru ahịa dị ugbu a nke £ 3,000 - nke pụtara £ 45. Dị ka e kwuru na mbụ, ọtụtụ n'ime ndị na-ere Bitcoin na anyị na-akwado na ibe a anaghị akwụ ụgwọ azụmahịa ọ bụla.
All Bitcoin agbanwe ga-ana a mgbasa. Dị ka oghere ọdịnala ọdịnala, nke a bụ ọdịiche dị n'etiti 'ịzụta' na 'ree' ego nke ihe onwunwe ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na Bitcoin nwere ọnụahịa 'zụrụ' nke $ 6,000, yana 'ere' nke $ 6,060. Site na ịgbakọ ihe dị iche n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ, anyị na-enweta mgbasa nke 1%. Nke a pụtara na ịchọrọ ntinye ego Bitcoin gị ka ọ bawanye ma ọ dịkarịa ala 1% naanị iji mebie.
Ọtụtụ mgbe azụmahịa dị n'etiti mgbasa na ọrụ ndị ndị na-ere Bitcoin na-ebo ebubo, yabụ ịkwesịrị ịlele nke a tupu ịbanye. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na onye na-ere ahịa anaghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ọ bụla, ịnwere ike ịchọpụta na mgbasa ozi ya anaghị asọmpi.
Kedu ka ndị na-azụ Bitcoin na-arụ ọrụ?
Agbanyeghị etu usoro itinye ego na arụ ọrụ na broka Bitcoin? Ọ bụrụ otu a, ị ga-ahụ usoro ntụpụrụ-ọsọ dị mfe akọwapụtara n’okpuru. Nke a na - ekpughe usoro njedebe na njedebe nke imepe akaụntụ, itinye ego, ịzụta Bitcoin, yana ihe dị oke mkpa - ịchụ ego gị.
Kwụpụ 1: Chọta Bitcoin Broker
Iji mee ka bọl ahụ na-aga, ị ga-achọ onye na-ahụ maka Bitcoin na-egbo mkpa gị. Y’oburu n’icho uda nke itinye ego na Bitcoin site na CFDs, igha achota ihe anyi choro n’elu ise ka edere ya na ala peeji a.
Y’oburu n’inwe ‘Bitcoin’ n’ezie, o puru iji eToro. Nke a bụ n'ihi na a na-achịkwa ikpo okwu, ọ na-anabata ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, yana n'ikpeazụ - ịkwesighi ịdọrọ mkpụrụ ego gị.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme nyocha nke gị, pịrịgaa na ngalaba anyị na otu esi ahoputa onye ahia Bitcoin?
Iji zụta Bitcoin na onye na-ere ahịa na-achịkwa, ị ga-emepe akaụntụ. Echegbula - usoro a adịkarịghị ewe karịa 5-10 nkeji, na ozugbo ị na-melite na ị na-free ịzụta ma na-ere Bitcoin dị ka ị chọrọ.
Iji nweta usoro a, ị ga-enye ozi ndị a:
Ga-ahọrọ aha njirimara na paswọọdụ siri ike. Ọzọkwa - na ikekwe kachasị mkpa, achọrọ ndị na-achịkwa usoro ego iji nyochaa njirimara gị tupu ị nwee ike itinye ego.
Ọzọkwa, usoro ahụ na-ewe nkeji. Ihe ị ga - eme bụ bulite akwụkwọ doro anya nke paspọtụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala, na ikpo okwu ga-enwe ike ịkwado akwụkwọ ahụ ozugbo.
Now ga-achọ itinye ego ugbu a na akaụntụ Bitcoin broker ọhụrụ gị. Dịka anyị tụlere na mbụ, nke a nwere ike ịgụnye nhọrọ nke kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ akụ, ma ọ bụ obere akpa.
Tupu ịga n'ihu, lelee iji hụ ihe nkwụnye ego kacha nta nke onye na-ere ahịa. I kwesịkwara ịlele ma onye na-ere ahịa ga-akwụ gị ụgwọ na usoro nkwụnye ego ị họọrọ.
Kwụpụ 4: Zụrụ Bitcoin
Ozugbo e nyegoro akaụntụ gị, ị dịla njikere ịzụta Bitcoin. Nke a ga-achọ ka ịtọ ntọala ịzụta, yabụ gbaa mbọ soro usoro ndị edepụtara n'okpuru.
Họrọ iwu 'zụrụ'
Tinye ego Bitcoin ịchọrọ ịzụta na ego mpaghara gị
Họrọ ahia ka iwere ugwo ozo di
Debe usoro nkwụsị-nkwụsị ma ọ bụrụ na ịchọrọ imechi azụmahịa gị na ọnụahịa ụfọdụ ma ọ bụrụ na ahịa na-emegide gị
Ozugbo ị kwadoro usoro ịzụta, ịzụta gị ị ga-egbu gị n'ime sekọnd ole na ole.
Kwụpụ 5: Inye Ego Gị
Ọ bụrụ n’ịzụrụ Bitcoin na onye na-ere ahịa CFD (ma ọ bụ na eToro), ịkwesighi ime ihe ọ bụla ọzọ. Ọfọn, ọ bụghị ruo mgbe ị kpebiri ire Bitcoin gị - na-atụ anya na ọnụahịa dị elu karịa ka ị kwụrụ.
Ọ bụrụ na ịmee, ị ga-abanyeghachi na akaụntụ Bitcoin broka gị, wee debe ahịa ahịa. Sekọnd ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ị gaghị ejide Bitcoin ọzọ, a ga-atụkwasị ihe ha retara na ego gị.
Nwere ike weghachite ego ahụ n'otu usoro ịkwụ ụgwọ ahụ ị na-etinyebu!
Chọta ndị kacha mma Bitcoin Broka
Onweghi ihe dịka 'onye ahia Bitcoin kacha mma' kwa, sị, dịka nyiwe abụọ adịghị. Ọmụmaatụ, mgbe otu ore nwere ike na-enye ibu-uko na-agbasa na obere isslọrụ, ọ nwere ike ọ gaghị na-akwado gị họọrọ ugwo usoro. N'otu aka ahụ, onye na-ere ahia nwere ike ijide ikpo akwụkwọ ikike, mana ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na nkwụnye ego na nkwụghachi ụgwọ dị elu.
Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịgụ site na ntuziaka dị n'okpuru ebe ị na-achụ nta maka ndị na-ere Bitcoin kacha mma nke 2021.
Isi ihe a enweghị ike ịgbanwe. N’ụzọ dị oke mkpa, ị ga-ahụrịrị na a na-achịkwa onye na-azụ ahịa Bitcoin ị họọrọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, zere ya. Anyị na-ahọrọ ndị na-ere Bitcoin na-achịkwa site na otu ọkwa dị ka FCA, ASIC, ma ọ bụ CySEC. Nke a ga - ahụ na ị nwere ike ịzụta ma ree Bitcoin bụ gburugburu ebe nchekwa na nchekwa.
Lelee ịhụ ụdị usoro ịkwụ ụgwọ Bitcoin na-akwado. Anyị na-ahọrọ ndị na-ere ahịa na-enye nkwụnye ego na-akwụghị ụgwọ site na debit / kaadị akwụmụgwọ na e-wallets, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na a ga-etinye akaụntụ gị n'otu ntabi anya. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị na-ere Bitcoin na-enye gị ohere itinye ego na akaụntụ akụ. Otú ọ dị, ị ga-echere ụbọchị ole na ole ka ego wee kpochapụ.
Ga-akwụ ụgwọ ego ụfọdụ n'ụdị mgbe ị na-eji onye na-ere ahịa Bitcoin, yabụ kpachara anya chọpụta ihe nke a tupu ịbanye. N'ime ụwa zuru oke, ị kwesịrị iji onye na-ere ahịa na-enye gị ohere ịzụ ahịa Bitcoin na enweghị ọrụ, yana mgbasawanye siri ike.
F CFDs ma ọ bụ 'Ezigbo Bitcoin'
Ọ dị mkpa ka ị ghọta ihe kpatara itinye ego nke Bitcoin gị. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụta Bitcoin n’ezie, n’ọtụtụ ikpe, ị ga-ewepụ mkpụrụ ego na obere akpa. Y’oburu n’ichoo ndi CFD, igaghi enwe akuru di n’agha. Mana, ị ga-enwe ike itinye ihe ntinye ego na ire ere Bitcoin, na onye na-ere ahịa CFD ga-ekwesịrị ịhazi oke.
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke cryptocurrencies, mgbe ahụ ọ nwere ike ịba uru site na iji Bitcoin broker na-enye akụnụba nke agụmakwụkwọ. Nke a nwere ike ịgụnye vidiyo dị mma, ntuziaka nke usoro, na webinars.
Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ọchụnta ego nwere ahụmahụ, soro ndị na-ere ahịa Bitcoin na-enye ngwa ọrụ eserese dị elu, ihe ngosi nka na ozi ọma.
Echefukwala inyocha ihe ọwa ọrụ ndị ahịa na-enye - dị ka nkata ndụ, email, na nkwado ekwentị. Ọzọkwa, lelee iji mara ma oge mmeghe ndị otu ahụ yiri nke mpaghara mpaghara gị.
5 Best Bitcoin Broka nke 2021 - Top Top anyị
Njikere ịzụta Bitcoin ugbu a, mana ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ahịa na DIY? Ọ bụrụ otu a, ị ga - ahụ n’elu ụlọ ọrụ Bitcoin kacha mma na 2021.
Tupu ị gụọ nke ọ bụla n’ime nhọrọ ise anyị nwere, ọ dị mkpa iburu n’obi na nyiwe anyị niile akwadoro ga-agbaso njirisi ndị a:
Kwado ụzọ ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị
1. eToro - Bitcoin kacha mma maka ndị mbido
Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụụ zuru ụwa ọnụ nke Bitcoin nke ntinye ego n'ịntanetị, anyị ga-atụ aro eToro. A na-achịkwa ikpo okwu site na ọkwa atọ-otu. Nke a gụnyere FCA, ASIC, na CySEC. Dịka, ego gị dị mma n'oge niile. Enweghị ụgwọ iji tinye ego, usoro ịkwụ ụgwọ na-akwado gụnyere kaadị debit / kaadị, e-wallets, na nnyefe ego.
Ozugbo i nwetara ego n'ime eToro, usoro ịzụrụ ihe na-ewe naanị nkeji. N'ezie, eToro bụ otu n'ime ndị na-ere ahịa ole na ole na - enye gị nhọrọ ịzụrụ 'ezigbo' Bitcoin, ma ọ bụ itinye ego site na CFDs. Y’oburu n’ichoo nke mbu, igaghi enwe ike itinye ihe leverage ma obu mee mkpụmkpụ. Kama, ikwesiri itinye ego site na CFD.
Ka o sina dị, eToro anaghị akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ azụmahịa ọ bụla-n'agbanyeghị ma ị na-azụta 'ezigbo' Bitcoin ma ọ bụ na-azụ ahịa CFDs. Anyị na-amasị eToro maka onyinye ahia oyiri ya. Nke a na - enye gị ohere itinye aka na ahịa nke ndị ọzọ na - etinye ego na crypto, yabụ ọ zuru oke ma ọ bụrụ na ị maghị ohere ..
Na mmechi, ugbua ahia ahia di ugbua juputara na ndi Bitcoin na-ere ahia. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụghị naanị na ịchọrọ iwepụta oge iji chọpụta ma ị na-azụta 'ezigbo' Bitcoin ma ọ bụ CFDs, mana ịkwesịrị ịlele ọtụtụ ihe ndị ọzọ - dịka iwu, ụgwọ, ụgwọ, na ịkwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mee nyocha - na ịchọrọ ịzụrụ Bitcoin ugbu a, anyị edepụtala ndị ahịa ise kachasị elu nke afọ 2021. Ndị a na-azụ ahịa tupu oge a na-enye gị ohere ịzụta Bitcoin na nchekwa, ọnụ ahịa, na enweghị nkebi - yabụ usoro itinye ego na njedebe kwesịrị iji ihe karịrị nkeji iri!
Kedu ka m ga - esi zụta Bitcoin na ntanetị?
Site na ịbanye na otu nke ndị ahịa anyị akwadoro, ị nwere ike ịzụta Bitcoin na debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Nhọrọ ndị ọzọ gụnyere waya akụ ma ọ bụ obere akpa.
Kedu ego kacha nta nke Bitcoin m nwere ike ịzụta na onye na-ere ahịa n'ịntanetị?
Nke a dabere na Bitcoin broker ị debanyere aha. Ọbụghị naanị na ịchọrọ iji chọpụta ego nkwụnye ego pere mpe, mana yana ogo azụmaahịa kacha nta. Ọtụtụ oge, ị nwere ike ịmalite site na itinye ego na £ 50.
Kedu ihe kpatara m ji bulite NJ mgbe m na-eji Bitcoin broker?
Dị ka anyị na-akwado ndị na-ere ahịa Bitcoin nke ndị na-enye ikikere na-achịkwa, ị ga-ebugo otu ID gị. Nke a bụ iji hụ na onye na-ere ahịa na-ekwenye na iwu ụlọ na mpaghara na mgbochi ego.
Kedu nkwụnye ego m kwesịrị ịkwụ mgbe m na-eji kaadị debit / kaadị iji zụta Bitcoin?
Ọzọkwa, nke a dịgasị iche dabere na onye na-ere ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ebe eToro na-enye gị ohere itinye ego na debit / kaadị akwụmụgwọ n'efu, Coinbase na-ebo 3.99% ụgwọ.
Kedu ka m ga - esi ree ego Bitcoin m?
Y’oburu n’inwere onye na-ere ahia CFD iji zụta Bitcoin, ị ga - etinyerịrị ire ere. Mgbe ị mere, a ga-agbakwunye ego na akaụntụ gị maka nkwụsị.
Achọrọ m ịchekwa ego Bitcoin m na obere akpa?
Ọ bụghị ma ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa CFD, dị ka akụ na-akpata nke dị adị.
Enwere m ike ịme obere Bitcoin?
Eeh, inwere ike ime mkpirikpi Bitcoin site na iji onye na-ere ahia CFD. N'ime ime nke a, ị nwekwara ike itinye ihe mgbakwunye.